आजको विनिमयदर बढ्यो, कुन देशको कति पुग्यो हेर्नुस्? – दैनिक नेपाल न्युज
आजको विनिमयदर बढ्यो, कुन देशको कति पुग्यो हेर्नुस्?
प्रकाशित द्वारा: बिहिबार, कार्तिक २८, २०७६
काठमाडौं । आज अमेरिकी डलरसहित प्रायः देशको मुद्राको भाउ बढेको छ । नेपाल राष्ट्रबैकंले आजका लागी तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११५ रुपैयाँ ५ पैसा तथा बिक्रिदर ११५ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । त्यस्तै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रिदर १४८ रुपैयाँ ६२ पैसा रहेको छ ।
मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ७० पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ । बहराईन दिनार एकको खरिददर ३ सय ५ रुपैयाँ १८ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ६ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ । साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ ।
त्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ । कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ७८ रुपैयाँ ७१ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ८० रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ । युएई दिराम एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको छ ।
बिहिबारको दिन भुलेर पनि नगर्नुहोस् यस्ता काम, नत्र जिन्दगिभर पछुताउनु पर्ला
निःशुल्क आखा जाँच तथा मोतीविन्दु शल्यक्रिया शिविर